Mahazatra, miaraka amin'ny pataloha jeans sy kapa | Bezzia
Mahazatra, miaraka amin'ny pataloha jeans sy kapa
Maria vazquez | 13/09/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Manakaiky ny fararano nefa mbola maro ny andro, raha tsy fahavaratra, miaraka amin'ny mari-pana mahafinaritra mbola tsy maintsy ankafizintsika. Afaka manohy mitafy ny akanjo fahavaratra ankafizinao ary mamorona avy amin'izy ireo ny fomba toa ireto miaraka amin'ny pataloha jeans sy kapa izay arosonay anio.
Mbola aloha loatra ny miala an-daharana kapa sy tampon'ny tanky, Na any avaratra aza! Azo inoana fa amin'ny fotoana sasany dia tsy hanao akanjo lava lava isika, fa tsy handroaka tampon-tanky tsy ho ela rehefa afaka mametraka azy ireo ambonin'ireo akanjo lava sy palitao ireo hiatrehana ny ora mangatsiaka kokoa amin'ny andro.
3 Akanjo ambony
Akanjo tsy manam-potoana ny Jeans; ny fizaran-taona efatra amin'ny taona dia miaraka amintsika. Isika tsirairay avy dia manana ny ankafizintsika ary ireo no hampiasaintsika mba hamoronana akanjo mahazatra miaraka amin'ny pataloha jeans sy kapa mba hankafizantsika ny fiainana andavan'andro amin'ity taona ity. Na dia tsy maintsy lazaina aza ny zava-drehetra, ny zava-drehetra dia manondro fa io fahalavoana io dia ireo endrika mahitsy izay hiakatra eo afovoany.
Inona no hataonao mandritra ny andro? Raha hifindra eto ianao dia mety tianao kokoa miloka amin'ny kapa fisaka. Tamin'ity taona ity, ny kapaoty karazana angady dia nanana andraikitra lehibe, na dia tsy isika rehetra rehetra aza no zatra miara-mandeha amin'izy ireo. Raha anisan'ity vondrona farany ity ianao dia mety aleonao miloka amin'ny kapa misy fehy manify mifatotra amin'ny vodin-tongotra misy voditongotra ambany na salantsalany.
Betsaka ny zavatra azontsika atao mba hamitana ny endritsika. T-shirt sy akanjo ba mahazatra Izy ireo no ho tonga mpiara-miasa mahomby indrindra hamoronana akanjo mahazatra izay manjaka ny fampiononana. Eny, ireo lobaka tsy misy kofehy ihany koa, na dia mampifangaro azy ireo amin'ny kojakoja mifanaraka aminy aza ianao dia afaka mahatratra fomba folo hivoaka tolakandro na alina toy ny nataon'i Sheryl.
Ny tampon'ny vokatra dia misy kofehy misy antsipiriany momba ny ruffle sy ny blouse vita amin'ny puff fotsy Izy ireo dia mety hahatratrarana endrika tantaram-pitiavana kokoa. Na dia miloka amin'ny lobaka tsotra sy akanjo lava aza ianao dia afaka mahazo endrika tsy miandany, malina kokoa sy ara-dalàna. Ary eny, ny blouse sy lobaka misy pirinty voninkazo miloko dia safidy ihany koa, mariky ny fanoherana ny fararano izay ho avy.
Tianao ve ireo karazana akanjo misy pataloha jeans sy kapa ireo? Inona no tianao indrindra?
Sary - @sincerelyjules, @collagev waina, @tineandreaa, @adelinerbr, @bartabacmode, @ cindy.octaviany, @karinemilyblog, @ frenchstyle.agi, @walkinwonderland
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Mahazatra, miaraka amin'ny pataloha jeans sy kapa
Mametraha trano fonenana ao an-trano ary araraoty tsara ny ririnina